Wararkii Ugu Danbeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Iyo Waxyaabihii Ay Maanta Oo Salaasa Ah Ka Qoreen Wargaysyada Yurub. - Hoyga Wararka
Home Sports News	Wararkii Ugu Danbeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Iyo Waxyaabihii Ay Maanta Oo Salaasa Ah Ka Qoreen Wargaysyada Yurub.
Wararkii Ugu Danbeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Iyo Waxyaabihii Ay Maanta Oo Salaasa Ah Ka Qoreen Wargaysyada Yurub.
Shabakada Laacib oo aad uga barateen in ay marakasta si joogto ah idiinla socodsiiso wararka suuqa ayaa halkan idiinku soo ururisay wararkii ugu danbeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda iyo xidigaha la kala doonayo. m
FIIRO GAAR AH: Wararka Suuqa waxaa xaqiiqonimadooda iska leh hadba wargayska ku hor qoran ee xogta suuqa helay, sidaa daraadeed, shabakada Laacib kama masuul aha xaqiiqinimada warkan maadaama oo aanu soo turjunay oo kaliya.
Halyeeyga Barcelona Samuel Eto’o ayaa ugu baaqay weeraryahanka Liverpool Mohamed Salah inuu ka tago kooxda heysata koobka Champions League una dhaqaaqo Camp Nou haddii uu doonaya inuu ka mid noqdo xiddigaha ugu fiican caalamka. (Daily Mirror)
Arsenal ayaa laga soo diiday dalabkii labaad ee ay ka gudbiyeen daafaca bidix ee Celtic Kieran Tierney iyadoo kooxda heysata horyaalka Scotland ay ku dooneyso 25 milyan ginni. (Daily Mirror)
Juan Mata ayaa mushaharkiisa isbuuclaha ka dhimaya 45 kun ginni si uu qandaraas cusub ugu saxiixo una sii joogo Manchester United. (The Sun)
Tababaraha kooxda Arsenal Unai Emery ayaa ka codsaday madaxda koxda inay bangiga u jabiyaan saxiixa weeraryaanka Crystal Palace Wilfried Zaha kaasoo qiimihiisa lagu sheegay 55 milyan ginni. (The Sun)
Daafaca Leicester City iyo xulka England Harry Maguire oo 26 sanno jir ah ayaa noqonaya daafaca ugu qaalisan dunida isbuucaan marka uu 80 miilyan ginni ugu biiro Manchester City isagoo iska diiday Manchester United. (Daily Mirror)
Liverpool iyo Manchester United ayaa ku dagaalami doona saxiixa xiddiga daafaca bidix ee Real Madrid 22 jirka Junior Firpo (Marca)
Manchester United ayaa 12 bilood ku kordhin doonta qandaraaska Rashford taasoo qeyb ka aheyn heshiiskii uu hore u ssaxiixay ka dib markii ay soo baxday cabsi la xiriirta in weeraryahanka uu bixi karo marka uu qandaraaskiisa caadiga ah dhaco xagaaga danbe. (The Sun)
Inter Milan ayaa weli 25 milyan euro ka hooseysa qiimaha ay Manchester United ku qiimeyneyso weeraryahanka reer Belgium ee Romelu Lukaku. (La Gazzetta dello Sport)
Newcastle United ayaa siku dayi doonta inay ka dhaadhiciso tababare Rafa Benitez inuu kordhiyo qandaraaskiisa tababarenimo. 59 jirkaan oo qandaraaskiisa uu dhacayo dhamaadka sibuucaan ayaa lagu waramayaa inuu dalab ka helay Shiinaha. (Evening Chronicle)
Real Betis ayaa xiiseyneysa weeraryahanka reer Belgium iyo kooxda Liverpool Divock Origi oo 24 sanno jir ah. (Estadio Deportivo)
Xiddiga diirada u saaran kooxda Liverpool Nicolas Pepe ayaa waxaa 80 milyan ginni ku soo dalbatay Inter Milan. Kooxda ka dhisan horyaalka Serie A ayaa ka mid ah dhowr kooxood oo doonaya 24 jirka reer Ivory Coast iyo kooxda Lille. (L’Equipe)
Tababaraha Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa si shaqsi ah uga codsaday maamulaha kooxda Ed Woodward inuu si degdeg ah ugu dhaqaaqo soo xerogelinta xiddiga khadka dhexe ee Sporting Lisbon iyo Portugal 24 jirka Bruno Fernandes. (Record)
Dhanka kale Manchester United ayaa qarka u saaran inay la soo saxiixa 16 jirka reer Spain ee garabka uga ciyaara Real Zaragoza Matteo Mejia iyagoo kula soo wareegaya heshiis marka hore ah 600 kun ginni. (The Sun)
Arsenal ayaa ka fiirsaneysa inay iibiso Lucas Torriera oo 23 sanno jir ah ka dib markii AC Milan ay gudbisay dalabkoodii ugu horeeyay ee xiddiga khadka dhexe ee Uruguay. (Sport Mediaset)
Luis Suarez Oo Lagu Maadsaday Markii Uu Xalay Ku Eedeeyay Goolhaye Kubad Ka Badbaadiyay Inuu Kubada Gacanta Ku Taabtay
intee in le’eg ayey Qadan doonta dhaawaca soo...
Diego Simeone Waxey Riyadiisu aheyd inuu inter-milan maamule...
Cristiano Ronaldo ayaa diirada saaraya qaab ciyaareedka Manchester...
Meesha Ugu Fiican Ee Laga iibsado Bugaagta Online...
Barcelona iyo Juventus ayaa u muuqda inay boosas...
Alexis Sanchez oo laga codsadey inuu cadeeyo Qiimaha...
Xilliga Rasmiga Ah Ee la Qabanayo Dorashada Konfur...
Riyadeydu waa inaan taariikh ka dhigo Barcelona Sidaa...